Umthetho: qaphela, iminyaka yemvume iyahluka | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya The Law Age yokuvuma
Enye yezinselelo ezinkulu kubazali, ezikoleni, abantu abasha kanye neziphathimandla zomthetho namuhla ukusiza intsha ivikeleke ngokuphepha emkhatsini we-16 neminyaka eyi-18. Ubuchwepheshe be-intanethi kwenza ukudalwa nokudluliselwa kwezithombe zokuvusa ucansi kuyatholakala kunoma ubani onesi-smartphone, kufaka phakathi noma yimuphi ingane. Ubugebengu bobulili buyi-53% kusukela ku-2006-7 ngokusho kwezibalo ze-2015-16 ezivezwe nguHulumeni waseScotland. Ukuvuka okukhulu kakhulu ekubikeleni ubugebengu bobulili ngenxa yecala le-Savile effect kanye nendlela 'yokubekezelelana' kwamaphoyisa kanye nezinkonzo zokushushisa. Ukukhuphuka okukhulu kuhambisana nokufika kokufinyelela okukhulu kwe-intanethi. Kungenzeka yini ukuthi ukwandisa ukufinyeleleka kwezithombe zobulili ezingcolile kuyi-intanethi kube yisici esibalulekile?
Umthetho mayelana nokuhlukunyezwa ngokocansi ku I-England ne-Wales futhi ngo Scotland ucabangela umuntu osemusha "ingane," futhi edinge ukuvikelwa, kuze kube yilapho eyi-18 iminyaka.
Noma kunjalo iminyaka yokuvuma ubulili ingu-16 iminyaka. Intsha eningi ayiqapheli ukuthi nakuba ingaphezu kweminyaka yobudala bobulili, ayivunyelwe emthethweni ukuthatha u-selfies ongathandeki futhi uyithumele kuze kube yilapho eyi-18 yeminyaka ubudala. Ukutholakala kwezithombe zezingane 'ngaphandle kwemvume akuvumelekile. Ingane ngaphansi kwe-13 ayikho ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, inekhono lomthetho lokuvuma noma yiluphi uhlobo lwezenzo zocansi.
Umthetho kule ndawo wawuhloswe ngokuyinhloko ukufaka isicelo kubantu abesilisa abadala kanye nengxenye encane yabesifazane abanesithakazelo ekuhlanzeni izingane ababehlela ukuxhumana nabo ngokocansi noma abafuna ukubandakanya izingane ekufebeni noma ezithombeni ezingcolile. I umthetho eNgilandi naseWales ithi “Izingane ezibandakanyeka ekuthengiseni ngomzimba ngokuyinhloko ziyizisulu zokuhlukunyezwa kanti abantu abazisebenzisayo ngokubaxhaphaza, bangabahlukumezi bezingane.”
Manje ukuhunyushwa okuqinile 'kwezingane' kusho ukuthi intsha ehlola ukulangazela kwabo ngokocansi, ngosizo lobuchwepheshe obusha, ingahlawuliswa icala elibi locansi.
Ngokuqinisekile abashushisi baqaphele ukubuka zonke izimo futhi bafaka icala kuphela ngokushushiswa uma kunesithakazelo somphakathi ukwenza kanjalo.
Bazocabangela izinto ezinjengokuhlukana kweminyaka phakathi kwamaqembu, ubumbano phakathi kwamaqembu ngokuphathelene nesifo socansi, ngokomzimba, ngokomzwelo nasemfundweni kanye nobuhlobo bobudlelwane babo.
E-2014 eNgilandi, umfana wesikole waphenywa ngemuva kokuthumela isithombe sakhe esingenasici esithweni sakhe. Kamuva wathola isixwayiso sokudlulisela isithombe kubangane bakhe ngemuva kokuba yena nentombazane beyeke ukuba umbhangqwana. Umthetho omusha, Ukuziphatha Okuhlukumezayo Nokumelana Nezocansi, isebenza nge 'revenge porn' okusho ukudluliswa kwezithombe zocansi ngaphandle kwemvume. Bheka ikhasi elihlukile ku- ukuziphindiselela porn phezu kwakho.
Inkinga lapha ukungabikho noma ukwephula kwemvume. Indlela yokubekezelelana 'okungahambisani nalokho' kubonakala sengathi yamukelwa yiziphathimandla zokushushisa kanye namaphoyisa e-UK.
Kuyini Ukuvuma Emthethweni? >>